चाडपर्वमा चोरहरु सलबलाउँदै घरदेखि पसल र वित्तिय कारोबारसम्म चोरी – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
चाडपर्वमा चोरहरु सलबलाउँदै घरदेखि पसल र वित्तिय कारोबारसम्म चोरी
क्या बोर यार !मुख्यसमाज
इटहरी, ११ असोज २०७६ शनिबार । सनातन धर्मावलम्बीहरुको पवित्र र महान पर्व बडादशैं तथा तिहार नजिकँदै गर्दा इटहरीमा चोरहरुको बिगबिगी हुन थालेको छ । दैनिक जसो कहिँ न कहिँ चोरहरुले चोरी गरेका घटना हुन थालेका छन् ।
त्यो त ठूला ठूला सामान मात्र होइन नयाँ वर्ष २०७६ लागेकै महिनाको अन्तिम सातातिर इटहरीमा महिलाका भित्री बस्त्र ‘ब्रा’ सुकाएकै ठाउँमा हराएर हैरान बनाएका थिए । त्यो ब्रा कसले के प्रयोजनका लगेको थियो कुनै अत्तोपत्तो भएन ।
विभिन्न बैंकको खाताबाट ह्याक गरेर ५ अर्बको लक्ष्यका साथ चोरी गर्न लाग्ने गिरोहले करिब ५ करोड चोरि गर्दा गर्दै पक्राउ परेको घटनासँगै विभिन्न सहरहरुमा चोरहरुको बिगबिगी भएको छ ।
यहि हप्ता इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ मा दिउँसो घरभित्र पसेर सामान चोरी भयो । दुर्लभ कार्कीको घरभित्र पसेर चोरले आमा स्कुलमा बच्चा लिन गएको मौका छोपेर चोरी ग¥र्यो । परिवारका अनुसार नगद र गरगहना गरी करिब ५ लाखको क्षति पु¥याएको छ ।
सानातिना सामान चोर्नेहरुको हिसाबकिताब नै छैन ।
यो घरभित्र पसेर चोरी गर्नेको समाचारसँगै अर्को वित्तिय कारोबार भईरहेको ठाउँबाट चोरी गर्नेहरुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने इन्दिरा राईले इटहरीको चोकमा रहेको सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरबाट निकालेको रकम तेह्रथुमका रमेश कार्कीले चोरेर भाग्दा भाग्दै प्रहरीले पक्राउ ग¥र्यो । उनले राईको २३ हजार ८ सय ५८ रुपैया चोरी गरेका थिए ।
इटहरीमा दसै खर्चको लागि निकालिएको पैसा आईएमईबाटै चोरी गर्ने कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ पछि चोरी मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान सुरु गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्थानीय घाट जानबाट रोक्ने गरी निर्माण भएको पर्खाल स्थानीयले भत्काए
नाकढुंगादेखि नौबिसेसम्मको जाम हुन नदिन ठूला मालवाहक गाडीमाथि रोक